Coral Reef: သစ်သစ်နှင့် ချစ်ဒုက္ခများ
Anonymous said on October 22, 2012 at 12:03 AM
ခေါင်းစဉ်ဖတ်လိုက်တော့ ဘလော့ရေးတဲ သစ်သစ် ကိုပြောတယ် မှတ်နေတာ.. :P
ညီလင်းသစ် said on October 22, 2012 at 12:26 AM
အတ္တနဲ့ ပရ လွန်ဆွဲနေသူ တစ်ယောက်ရဲ့ စိတ်ကလေး မြင်လိုက်ရတယ်၊ အတ္တအတွက် တခါတခါ ပိုပြီး အချိန်ပေးချင် ပေမယ့်လည်း ပရနဲ့ ပတ်သက်လာရင် ငြင်းပယ်ဖို့ ဝန်လေးတတ်သူ လို့ ခံစားနားလည် ရပါတယ်...၊
စိတ်ဝင်စားစရာ စာကြောင်းလေး တစ်ကြောင်းလည်း သတိထားမိ လိုက်တယ်၊ ̔ အချစ်ဆိုတာ ကာလတစ်ခုအထိ သည်းခံပြီးရင် ပျောက်ကွယ်တတ်တယ်... ̔ ဆိုတာလေ...၊ အချစ်စစ်ဆိုတာ တကယ်ပဲ အဲဒီလို ပျောက်ကွယ်သွားနိုင် သလား? ကာလ ရှည်ကြာစွာ သည်းခံနေခဲ့ရတယ် ဆိုကတည်းက အဲဒီအရာဟာ အချစ် ဖြစ်နိုင်သေးရဲ့လား? ..... ? ဆင့်ပွားတွေးစရာတွေ ရသွားခဲ့တယ် ဇွန်ရေ...။
Anonymous said on October 22, 2012 at 9:58 AM
:D တစ်ခါတစ်လေမှာ အဲ့လိုတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ် . :P
Lynsie said on October 22, 2012 at 5:02 PM
Shinlay said on October 22, 2012 at 7:49 PM
သစ်သစ် ကိုပြောလိုက်ပါနော်။ ကုသိုလ်တွေရသွားပြီလို့ ။
Anonymous said on October 22, 2012 at 8:58 PM
ကိုယ်တွေ့ အဖြစ်အပျက်ကို ပြန်ရေးထားတာလားဟင်..
ခင်လို့ စ တာ..စိတ် မဆိုးရဘူး..
ဇွန်မိုးစက် said on October 22, 2012 at 10:53 PM
ပြုံးသွားတဲ့ အစ်မစင်စင်... ဇာတ်ကောင်သစ်သစ်ပါ၊ ဘလော့ဂါသစ်သစ် ဟုတ်ဖူးရယ်။ :D
ဆင့်ပွားအတွေးတွေနဲ့ ကိုညီလင်းသစ်ရေ... အချစ်စစ်ပါပဲ။ အချစ်ထက် စိတ်က ကုန်သွားတာပါလို့ဖြေရရင် ပိုမှန်မလားပဲ။
ဟုတ်ပါတယ်... ဆောင်းနှင်းရေ၊ အဲလိုဖြစ်တတ်တဲ့အထဲ သစ်သစ်က ထိပ်ဆုံးကများ ပါနေလားလို့လေ။ ;)
@Lynsie အဲဒီ့ထဲက ဇာတ်ကောင်တွေကို သူငယ်ချင်းသိနေတယ်ဆိုရင် ပိုအံ့သြဦးမယ်။ ဒါပေမယ့် သစ်သစ်က မပြောရဘူးလို့ မှာထားတယ်။ :)
မရှင်လေးရေ... စိတ်ချ၊ သစ်သစ်ကို ပြန်ပြောလိုက်မယ်နော်။း)
အမည်မသိစာဖတ်သူရေ... စာရေးဆရာဆိုတာ ဒီလိုပါပဲကွယ်၊ ကိုယ်တွေ့ဖြစ်ဖြစ်၊ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ မြင်ရတာပဲဖြစ်ဖြစ် ဇာတ်ကောင်ဖန်တီးပြီး ရေးဖွဲ့လိုက်ကြတာဆိုတော့... :P
စိတ်မဆိုးပါဘူး၊ အချိန်ပေးပြီး လာဖတ်တဲ့အတွက်တောင် ကျေးဇူးတင်ရဦးမှာ။ :)
သက်ဝေ said on October 23, 2012 at 7:50 AM
ဖတ်ပြီး သဘောကျလွန်းလို့ အကြီးကြီး ပြုံးသွားတယ် ချစ်ညီမရေ...
ဇွန်မိုးစက် said on October 23, 2012 at 9:47 PM
ဒီတစ်ခါ မမသက်ဝေ အကြီးကြီးပြုံးသွားတယ်ဆိုလို့ ဇွန် ကျေနပ်သွားပြီ။း)
Ingjin Thant said on October 27, 2012 at 1:46 PM
သဘောကျလို့ ပြုံးရုံတင်မက ရီသွားတယ် :D
မိုးနတ်ကြယ်စင် said on November 4, 2012 at 8:04 PM